I-Playz yethula uhlelo lokusebenza lapho uzobona khona konke okuqukethwe koqobo | Izindaba zamagajethi
I-Playz yethula uhlelo lwayo lokusebenza ukubuka konke okuqukethwe kwayo koqobo
U-Eder Esteban | | Ukuphanga
I-Playz yindawo entsha yokuqukethwe yedijithali ye-RTVE lapho sithola khona ukukhetha okubanzi kokuqukethwe okutholakalayo. Iqukethe uhlobo lwama-series, ama-documentary, izindawo zezemidlalo nezinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa. Ngamafuphi, kukhona ukukhetha okuhle okutholakala kule platform.
Uhlelo lokusebenza lwe-Playz lwethulwa kumafoni namathebulethi, kokubili i-Android ne-iOS. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, uzokwazi ukujabulela konke okuqukethwe lesi sikhala esisinikeza sona ngendlela elula. Inketho ekahle yokubuka le mibukiso nochungechunge efonini yakho.
I-Playz isibe ngokuqukethwe okuthandwa kakhulu ku-RTVE ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi ikhule ngale ndlela.
1 Okuqukethwe kwasekuqaleni kwe-Playz
2 Uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Playz
3 Thwebula Playz
Okuqukethwe kwasekuqaleni kwe-Playz
Ukhiye omkhulu wokuphumelela kwale pulatifomu ukukhethwa okukhulu kokuqukethwe koqobo banayo etholakalayo. Njengoba sishilo, sithola inani elikhulu lochungechunge kuyo. Iziqu ezinjengeCupido, Mambo, Dorien, The Cold Spot, Colegas, Inhibidos noma iSi fueras tú zijabulela ukuthandwa kakhulu emsamo. Eqinisweni, imibono yabo idlula izigidi ezingama-25.
Isibalo esikwenza kucace ukuthandwa okwenza i-Playz nakho konke okuqukethwe koqobo abakudalayo. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okusha kuzoza maduze, phakathi kwabo uLimbo, abalingisi abalingisa abalingisa abalingisa abanjengo-Eloy Azorín no-Ingrid García-Johnson.
Futhi kunamadokhumentari amaningi kuzo zonke izinhlobo zezihloko, kusukela ekukhulelweni kwentsha, emvelweni nasekuvuseleleni kabusha, amagama evidiyo… Izihloko ezithandayo nezithinta abantu abaningi. Ngenxa yabo ungafunda kabanzi ngezihloko ezithile, kepha kukhona namathiphu, amaqhinga nolwazi oluningi oluwusizo olutholakalayo. Ngakho-ke impela ilusizo kakhulu enanini elikhulu labasebenzisi.
Ngakho-ke njengoba ubona, ukukhethwa kokuqukethwe kubanzi futhi kuyaqhubeka nokukhula. Ngakho-ke ngenxa yePlayz uzokwazi ukujabulela uchungechunge lukazwelonke lwekhwalithi enhle, nokuhluka kakhulu. Ngakho-ke kuzoba lula ukuthola into oyithandayo kule pulatifomu.
Uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Playz
Ukwenza okuqukethwe okunikela kufinyeleleke kalula kubasebenzisi, lolu hlelo olusemthethweni lwe-Playz lwethulwa. I- uzokwazi ukulanda kumadivayisi we-Android ne-iOS. Ukuze uzokwazi ukubona konke okuqukethwe koqobo okutholakala endaweni yesikhulumi.
Ngaphezu kwalokho, isinikeza uchungechunge lwemisebenzi eyengeziwe eyenza iphelele kakhulu kuwo wonke umuntu. Njengoba sithola izaziso ezizosazisa uma sekusakazwa bukhoma okulandelayo. Futhi lapho kulayishwa isahluko esisha ochungechungeni olusithakazelisa kakhulu, sizokwazi ukuthola isaziso. Ngaphezu kwalokho, sizokwazi ukufinyelela kumaphrofayli omphakathi ku-Playz. Eminye imisebenzi eyengeziwe eyenza ulwazi lokusebenzisa uhlelo lokusebenza luphelele kakhulu.
Idizayini yesicelo ifana naleyo yewebhusayithi. Okuqukethwe uzothola ukuthi kuhlukaniswe izigaba ezahlukahlukene, ukuze singene kulokho okusithandayo. Lapho uchofoza uchungechunge noma uhlelo, sithola incazelo yalo futhi singabona zonke izahluko nezingcezu ezitholakalayo. Ngakho-ke, uma kukhona esikuphuthelwe noma esifuna ukukubona futhi, singakwenza kuhlelo lokusebenza lwe-Playz.
Futhi, ochungechungeni oluningi sinokuqukethwe okwengeziwe. Isibonelo, singabona izithombe ngemuva kwamakhamera, mayelana nokuthi isahluko saso sidutshulwa kanjani. Futhi sinomlando noma imvelaphi ethile, noma imidlalo esiholela kulo mhlaba. Ngakho-ke singafunda okwengeziwe ngomongo wayo. Kuthakazelisa ikakhulukazi ochungechungeni olususelwa kumicimbi yangempela. Kusukela ngale ndlela sinombono omkhulu ngomlando.
I-Playz ibeka izindaba zethu mayelana nalolu chungechunge nakho konke okuqukethwe abakusakazayo. Uma kuqinisekiswa ukuthi kunesizini entsha, uma bewinile noma beqokelwe izindondo ... Noma yiziphi izindaba ezibalulekile mayelana nochungechunge lwabo zizokwabiwa esicelweni. Ngakho-ke sihlala sisesikhathini njalo.
Kubo bonke abanentshisekelo, uhlelo lokusebenza manje selutholakala ku-Google Play Isitolo naku-App Store. Kuyinto isicelo esitholakala mahhala. Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo sokuthi sikhokhele noma yini ukukhiqiza konke okuqukethwe esinakho kukho. Okwenza kukhululeke kakhulu ukukwazi ukubuka uchungechunge esilufuna noma yikuphi.
Uhlelo lokusebenza luzobuyekezwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke sizobona ukuthi okuqukethwe okusha kwethulwa kanjani kuwo. Ngakho-ke izosinika izinketho eziningi futhi singajabulela uchungechunge nezinhlelo eziningi ocingweni lwethu.
Kubasebenzisi abanamadivayisi we-Android, ungayilanda ku- lesi sixhumanisi. Kuyinto Iyahambisana nawo wonke amafoni e-Android anezinguqulo ezingaphezu kwe-4.0.2. Futhi inesisindo esingu-10MB, ngakho-ke ngeke isinde kakhulu ocingweni ngokomthamo.
Thwebula Ikhodi ye-QR
Umthuthukisi: I-RTVE Imidiya Esebenzisana
Uma, ngakolunye uhlangothi, unedivayisi ye-iOS, ungayilanda kulesi sixhumanisi. Kulokhu inesisindo esingu-33,6 MB, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube nendawo etholakalayo. Iyahambisana nawo wonke lawo madivayisi anenguqulo ye-iOS elingana noma enkulu kune-9.0.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » I-Playz yethula uhlelo lwayo lokusebenza ukubuka konke okuqukethwe kwayo koqobo
ILG V40 izoba namakhamera ayisihlanu esewonke
IGalaxy Note 9 yethulwe ngo-Agasti 9